Toekarena sy Fandraharahàna · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Mey, 2017
Karaiba15 Mey 2017
Mba "hanapariahana ny toekarena", dia nampidirin'ny ramatoa Karaibiana iray mpandraharaha ny fampiasambola misokatra ary manasa ny vondro-piarahamonina izy mba hanampy ireo vehivavy ho amin'ny tena fandrosoana.
Toniziana Mpikatroka Amin'ny Media Alaina Ambavany Momba ny Loharan'ireo Antontan-taratasy Tafaporitsaka
Endrika manana ny maha-izy azy amin'ny media tsy mankina sy ny fikatrohana ho fiarovana ny zon'olombelona ao Tonizia sy any amin'ny faritra Arabo i Ben Gharbia.
Amerika Latina04 Mey 2017
Inona no nitranga tamin'ireo tanànan'ny mpanao siramamy kiobàna taorian'ny fandravana ireo orinasa fanadiovana siramamy kiobana izay nandrafitra ny tao-zava-baventy voalohany teo amin'ny firenena?
Azia Atsinanana04 Mey 2017
"Ampahany amin'ny zavatra izay tsy ankasitrahan'ny finoana silamo fa zava-poana ny habetsahan'ny selfies efa hitako nalain'ny olona mba hanehoana fotsiny ny foloara dUCK."
Azia Afovoany sy Kaokazy04 Mey 2017